LaTeX: shandisa zvinyorwa pakuda pamwe nevagadziri ava | Linux Vakapindwa muropa
LaTeX Iri izita iro vazhinji venyu muchanyatso ziva, rinopa sarudzo yakanaka kune vanyori vemarudzi ese ezvinyorwa, kusanganisira vesaenzi mune zvakawanda zvinoshandiswa nerudzi urwu rwevagadziri. Kune iyo GNU / Linux distros pane akati wandei aripo, muchokwadi takatotaura nezvavo muLxA. Navo, nekumisikidza nhevedzano yemirairo isu tinokwanisa kushandisa zvinyorwa uye zvemukati zvemapepa edu sekuda kwedu, dambudziko nderekuti rinoda kudzidza.
Kana isu tichinge takunda icho chipingamupinyi uye isu tatova neLaTeX domain, inogona kushanda senzira iri nyore kugadzira zvinyorwa zvedu zvemavara, izvo zvinowanzo gadzirirwa zvesainzi kana zvemahara zvinyorwa zvechinangwa chedzidzo. Pamusoro pazvose, zvinoita kuti hupenyu huve nyore kwatiri neakaoma masvomhu notations ayo mamwe mameseji edhisheni zvirongwa asingatibvumire isu kuti tiite. Zvisinei, kana izvi zvazivikanwa, ikozvino isu tichazopa mamwe akanakisa edhaidhi eLaTeX eLinux
Lyx: Iyo inoshamisa yakavhurika sosi yeLaTeX mupepeti, uye pamwe imwe yeakanakisa atinawo ekugovera kwedu. Nayo iwe unogona, kuburikidza nemirairo, fomati iwo mavara, margins, misoro, tsoka, nzvimbo nenzvimbo, matafura, nezvimwe.
Texmaker: Iyo zvakare yakanaka kwazvo LaTeX mupepeti weGNOME desktop nharaunda uye zvimwe zvigadzirwa. Iyo ine graphical interface inoyevedza uye inoshandiswa. Zvakare, kana iwe uchifunga kushandurira kuita rePDF fomati, uyu mupepeti uchave unonyanya kubatsira iwe.
TeXstudio- Imwe yakanaka mhariri ine zvimwe zvingasarudzika mikana, ine yakachena uye nyore kushandisa interface. Iyo inobvumidza kujekesa syntax, kutarisa gwaro, uye nezvimwe zvishandiso zvekubatsira
Texpen- Rakareruka mupepeti nehunogamuchirwa mashandiro, rinotokutendera iwe kugadzirisa uye kugadzirisa girama uye zvirevo (chete muChirungu) kana iwe uchitsvaga chimwe chinhu chakakosha.
ShareLaTeX: pakupedzisira isu tine iyi imwe, iri online mupepeti, iri nyore pasina kuisa uye inogona kushandiswa kubva kune chero system ine inoenderana webhu bhurawuza. Izvo zvinonyanya kufadza kumabasa ekubatana pakati pevanhu vanoverengeka ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Linux software » LaTeX: shandisa zvinyorwa sezvaunoda nevapepeti ava
Iyo yandakashandisa ndeye Texmaker pane linux uye pane peji repamhepo inonzi overleaf yakafanana chaizvo neShareLaTex